Itholwe eWhitefish Bay - I-Airbnb
Itholwe eWhitefish Bay
Whitefish Bay, Wisconsin, i-United States
I-iyunithi yokuqasha ephelele ibungazwe ngu-Tino
Leli fulethi elithokomele liyindawo ekahle yokubaleka, eseduze nedolobha kodwa endaweni enokuthula kude nesiphithiphithi. Kungahanjwa ku-Starbucks, izindawo zokudlela eziseduze, ukuyothenga kwezitolo, ezokuzijabulisa nokunye.
Leli fulethi lesibili lokulala eliyisi-2 lihlala esakhiweni esisetshenziswa okuxubile esingaphezulu kwegalari yohlaka kanye naphakathi kwamanye amafulethi.
Unomnyango wakho wangasese wokungena ngaphambi kwesakhiwo futhi kufanele ukhwele izitebhisi ukuze ukhuphuke uye kuyunithi.
Kunendawo yokupaka engaphezulu ohlangothini olusempumalanga yesakhiwo e-Elkhart eduze kwegaraji. Paka endaweni engakwesokudla kwegalaji eliseduze noHenry Clay (hhayi phambi komnyango wegalaji)
Lapha, ungaphakathi kwemayela le-Starbucks, i-Bayshore mall, iLake Michigan, ukuzijabulisa, izitolo zegrosa, nezitolo ze-boutique kanye nokudla eduze kwaseSilver Spring Drive.
Kuwuhambo olusheshayo lwemizuzu eyi-10 kuphela ukuya eDowntown & Fiserv Forum, futhi ukufinyelela kalula emigwaqweni kukunika ikhono lokuhlola idolobha lethu ngokugcwele!
Uhambo lwemizuzu engama-20 kuphela (ngaphandle kwethrafikhi) ukuya esikhumulweni sezindiza i-MKE International, kanye nemizuzu eyi-15 ukuya e-Amtrak Intermodal Station.
Ikamelo lokulala elincikene negumbi lokuphumula linombhede olingana nendlovukazi, futhi igumbi elingemuva linombhede ophindwe kabili nomunye umatilasi abangamawele ophuma ngaphansi. Amalambu aseceleni kombhede emakamelweni okulala anezindawo zokushaja ezakhiwe ukuze kube lula kuwe futhi amakhabethe anendawo yokulenga yempahla yakho.
Kukhona i-TV yekhebula egumbini lokuphumula lokuzijabulisa kwakho.
Igumbi lokugezela nekhishi kuncane kodwa kusebenza kahle endaweni.
Ikhishi lihlinzekwa ngezinto ezibalulekile zokupheka kukho konke ukudla kwakho okuphekwe ekhaya.
Ngicela uhloniphe imithetho yasekhaya!
Siyabonga, sibheke ngabomvu ukukubamba!
IWhitefish Bay iyindawo ephithizelayo, ebumbene enezakhiwo ezinakekelwa kahle namapaki amahle. Umphakathi wezakhamizi impilo yonke, ogcwele amabhizinisi ayingqophamlando kanye nezinto ezibalulekile endawo eziboleka umuzwa wokuziqhenya oza nokuhlala eWhitefish Bay.
Born and raised in Milwaukee, I am a long time real estate investor and serial entrepreneur. I enjoy serving people and showing others my community.
Hlola ezinye izinketho ezise- Whitefish Bay namaphethelo